Tag: njikọ maka ntuziaka mgbasa ozi ka mma | Martech Zone
Kpido: njikọta maka ntuziaka mgbasa ozi ka mma
All I Kwesịrị Tomara Banyere Ad Iweghachite
Fraịdee, June 16, 2017 Thursday, June 22, 2017 Gal Glikman
Otu n’ime nsogbu kasịnụ maka ndị na - ebipụta akwụkwọ na ahịa ọ bụla taa bụ ndị na - egbochi ndị mgbasa ozi. Maka ndị na-ere ahịa, ịrị elu na-egbochi mgbasa ozi na-eme ka enweghi ike iru ndị na-ege ntị na-achọsi ike. Tụkwasị na nke ahụ, ọnụọgụ mgbasa ozi dị elu na-eduga na obere ngwa ahịa, nke nwere ike mechaa mụbaa ọnụego CPM. Ebe ọ bụ na ndị na - egbochi mgbasa ozi malitere ọrụ ihe karịrị afọ iri gara aga, ọnụego adbloro arịgoro elu, na - enweta ọtụtụ nde ndị ọrụ ma gbasaa na ikpo okwu ọ bụla. Otu n'ime nchọpụta ọhụrụ